R/W C/Weli oo baaraya geerida Gen. Maxamed (Muxuu ka shakisan yahay?) - iftineducation.com
iftineducation.com – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed, ayaa magacaabay Guddiga Wasiiro ah oo ka kooban shan (5) oo beeritaan kusoo sameeya geerida kadiska ah ee ku timid taliyihii ciidanka booliska Soomaaliyeed.
5. Wasiirka Amniga Qaranka Mudane Khaliif Axmed Ereg (Xubin).
Cabdi Weli ma uusan sheegin shakiga laga qbao geerida ee keentay inuu magacaabo guddi soo baara.
Warar aynu helnay ayaa sheegaya in taliyaha uu u geeriyooda wadno xanuun kadis ah oo qabtay, balse waxaa la sheegay in Cabdi Weli uusan arrintaas ku qancin.
Lama qaban waqti ay guddigan baaritaankooda kusoo geba gebeeyaan.
General Maxamed Xasan Ismaciil oo ka mid ahaa saraakiishii booliska Soomaaliyeed mudada dheerna ka soo shaqeynayay ayaa horaantii bishii July ee sanadkan loo magacaabay taliyaha ciidamada Booliska Soomaaliyeed.
Xog ka duwan tii hore oo kasoo baxday geerida talyihii booliiska Soomaaliya